အိမ်ခြံမြေဈAnundgård, Holmes - "ဟောငျးAffär'n" | Holmbygden.se
တစ်ဦးကစုံတွဲတစ်တွဲကဒီမှာ holmbygden.se အပေါ်သူတို့ရဲ့အိပ်မက်အိမ်သူအိမ်သားကိုတွေ့နှင့်ယခုပြုလုပ်ရောင်းချခဲ့ရဲ့.
တစ်ဦးကစာရင်းထပ်ပိုင်ဆိုင်မှု Holmes, 400မီတာဘုရားကျောင်း, အရာယခင်ကခရိုင်၏စတိုးဆိုင်သျော - "ဟောငျးAffär'n" အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသည့်လူသိများ. အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှု "Anundgård 3:13"တစ်မြေပြင်ဧရိယာရှိထားသည် 2350 မီတာ2 ကောင်းသောကားပါကင်အဆောက်အဦးနှင့်အတူ.
မူရင်းအိမ်သူအိမ်သား (ရှုထောင့် 215 မီတာ2 မြေအောက်ခန်းနှင့်2အဆင့်ဆင့်) built 1911 မြေပြင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုက်လျောညီထွေနှင့်အပေါ်ထပ်နထေိုငျရပ်ကွက်မှ. 1990 ခုနှစ်တွင်, ဗိမာန်အပြည့်အဝပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပါတယ်နှင့်တစ်ခု extension ကို2လေယာဉ်ကိုတည်ဆောက် (ရှုထောင့် 75 m2) ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီအတွက်အခန်းတစ်ခန်းအောင်.
အပေါ်ထပ် Living ရပ်ကွက် 210 မီတာ2. အိုင်အမြင်နှင့်အတူအိမ်ခေါင်မိုးကျန်ကြွင်းသောအရပ်. အထက်ပါနေအိမ်၌အတွက်မီးဖိုချောင်နှင့်အိမ်သာနှင့်အတူန်ထမ်းများကအခန်းနှင့်အတူခေတ်မီရုံးခန်းများမှာ. high-speed ကအင်တာနက် (အမှငျြ). မြေပြင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာsutterängvåningတိုက်ခန်း၏ extension. အများအပြားကkallförrrådနှင့်အပူကားဂိုဒေါင်. စပျစ်ရည်နှင့်အာလူးအိမ်အောက်ခန်း 1911 အိမ်ယာအတွက်.